About Open Source and Myanmar font — MYSTERY ZILLION
About Open Source and Myanmar font
May 2009 edited June 2009 in Open Source
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ မြန်မာလိုရှင်းလင်းချက်များကို နှစ်သက်သဖြင့် ကျေးဇူးပြုပြီး Open Source အကြောင်းနှင့် OpenOffice မှာမြန်မာလို Font ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာလေး ရှင်းပြပေးမယ်ဆိုလျှင် ကျေးဇူးအရမ်းတင်မှာပါ.....:77::77::77:
Open Source အကြောင်းကို သေသေချာချာ မသိလို့ပါ..:O:O:O
ကျေးဇူးပြုပြီး ရှင်းပြပေးပါကြရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Ko bluerays....တကယ်ပြောတာလား? :P
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ မြန်မာလိုရှင်းလင်းချက်များကို နှစ်သက်သဖြင့် ဖတ်ချင်၍
Beginner wrote: »
မြန်မာလိုရှင်းလင်းချက်များကို နှစ်သက်သဖြင့် ကျေးဇူးပြုပြီး Open Source အကြောင်း ရှင်းပြပေးမယ်ဆိုလျှင် ကျေးဇူးအရမ်းတင်မှာပါ....
Open Source အကြောင်းကို သေသေချာချာ မသိလို့ပါ..
Open Source ဆိုတာ သိပ်ရှင်းပြစရာမလိုပါဘူး သူ့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်မှာ ပါပြီးသားပဲ ..
ဖွင့်ထားတဲ့ အရင်းအမြစ် .. ပင်ရင်းဖွင့်ပေါ့ ..
အဓိကအားဖြင့် ဘာတွေဖွင့်ထားပေးလဲ source code တွေပေါ့ .. documentation source code တွေ .. program source code တွေ အစရှိသဖြင့်ပေါ့ ..
အဲလို code တွေကို ဖွင့်ကြည့်ခွင့်ရတော့ ဘာအကျိုးရှိမလဲ ..
programs တွေ ဘယ်လိုရေးထားလဲ .. ဘာနဲ့ရေးထားလဲ .. programs ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ စသည်ဖြင့် အများကြီး အများကြီး လေ့လာခွင့်ရှိတယ် .. နောက်ပြီး ဒီထက်ပိုပြီး ကိုယ်က expert ဖြစ်ရင် အဲဒီ source code တွေကို review လုပ်ပြီး bugs report တွေရေးပေးနိုင်သေးတယ် .. အဲဒီ program ကို develop လုပ်နိုင်ပါသေးတယ် ..
အဲ open sources programs တွေကို free of charge နဲ့ download ယူနိုင်ပါသေးတယ် .. ကုန်ကျစရိတ် အများကြီးသက်သာတယ်နော် .. ပြောရင်တော့ အများကြီးပဲ ချဲ့ပြောလို့ရတယ် .. တကယ်စိတ်၀င်စားရင် စာတွေရှာဖတ်ပါအုံးနော်
open source နဲ့ open technology နဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုသိပါတယ်ခင်ဗျာ....ဒါပေမယ့်ကောင်းကောင်းမသိလို့နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာ
ဒီထက်ပိုရှင်းပြရင် ပိုပြီးကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။... :77::77::77:
OpenOffice မှာ မြန်မာ Font သုံးလို့ ရတယ်ဆိုတာကကော ဘယ်လိုမျိုးလဲဟင်? တကယ်မသိလို့ပါ။..:13::13::13:
topic နဲ့တော့မဆိုင်ဘူး ... ကို BOX02 ရှိတုန်းမေးချင်လို့ .. ကျွန်တော်က opensuse သုံးနေတာပါ .. သူ့ထဲမှာ zawgyi font ကို install ဘယ်လိုလုပ်လဲသိချင်လို့ဘာ .. zawgyi.tff တော့ရှိတယ် .. ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့ .. ကူညီပါဗျာ ..:77:
ကျနော့်မှာ လောလောဆယ် OpenSuse Install မလုပ်ထားဘူးဆိုတော့ directory တွေဘယ်လိုရှိနေလဲ မပြောတက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကို skyblue က ဘယ် version သုံးလဲမသိဘူး၊ နောက်ပြီး Gnome ကိုသုံးတာလား KDE ကိုသုံးတာလား ..
ဒါပေမယ့် '/usr/share/X11/xkb/symbols/' path ကိုရှာကြည့်နော် ..
mm file ကို အဲဒီ directory ထဲ ကူးထည့်လိုက်ရင် keyboard ကရပြီ ..
font အတွက်ကျတော့ ကိုယ့် home directory အောက်မှာပဲထားထား '/usr/share/fonts/' အောက်မှာပဲထားထား အဆင်ပြေပါတယ် ..
ဥပမာ font သွင်းမယ်ဆိုရင်
sudo mkdir /usr/share/fonts/myanmar-fonts
sudo cp Zawgyi*.ttf /usr/share/fonts/myanmar-fonts/
ဥပမာ mm file သွင်းမယ်ဆိုရင်
sudo cp -f mm /usr/share/X11/xkb/symbols/
ကျွန်တော်က OpenSuse 11.1 သုံးတာပါ .. Graphic Interface ကတော့ GNOME သုံးပါတယ် ကျွန်တော်အကိုပြောသလို usr/share/fonts ထဲကို zawgyi.tff file ကိုကူးထည့်ပေး ရုံနဲ့ ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလား ... ကျွန်တော်ကနဲနဲတော့ေ၀းတယ် .. ကားစီးမှရောက်တာ ..
အင်း ခုနောက်ပိုင်းကတော့ autoconfigure လုပ်ပေးတဲ့အတွက် ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး .
sudo fc-cache -v /usr/share/fonts/
အဲဒီ command ကို run ပေးလိုက်ပေါ့ ..
keyboard ရဖို့က ဟို mm file ကိုသွင်းပေးရမယ်နော်
အဲဒီအဆင့်ဆိုရင်တော့ font ပေါ်လာရုံပါပဲ... စာတော့ ရိုက်လို့ရအုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး.. Ubuntu နဲ့ Fedora အတွက် keyboard ကိုတော့
အခြား distro တွေကတော့ shell script နဲ့သွင်းရမှာပါ။ အဲဒါကို
ကျွန်တော်က Slax Linux ကိုသုံးပါတယ်။အဲဒီမှာ Zawgyi Font ကိုသုံးလို့ရအောင်ဘယ်လိုများလုပ်
ပါသလဲဗျာ။ကျွန်တော် http://code.google.com/p/zawgyi-keyboard/wiki/InstallGuideForPackageWithShellScript အတိုင်းInstall လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဘယ်နေရာမှာလိုနေလဲမသိဘူးသုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။စာလုံးအားလုံးဟာလဲ
ငြိမ်းချမ်း wrote: »
Slax ကိုတော့ တခါမှ မသုံးဖူးဘူး၊ ကျနော်ထင်တယ် သူ့ရဲ့ FHS ကလဲ တခြား Linux တွေနဲ့ တူမယ်လို့ယူဆပါတယ် .. အကယ်၍ FHS version တူခဲ့ရင်ပေါ့ ..
လေးတောင့်ကွက်တွေတွေ့တယ်ဆိုတော့ system ကို log out ဒါမှမဟုတ် reboot လုပ်ပေးကြည့်ပါလား ..
တီလေး သွင်းဘူးတယ်ဗျ... ကျွန်တော် တီလေးကို ပြန်မေးပေးမယ်.. သူ package ပြန်လုပ်ထားတာ ရှိတယ်... အဲဒါ သူ့ဆီက တောင်းပြီး တင်ပေးလိုက်မယ်...
ဟုတ် ကိုစေ .. ကောင်း၏ ..
နောက်ပြီး ကို Joemin ရဲ့ Posts ကိုအခြေခံပြီးတော့ BackTrack အတွက် pkg ကို ကျနော် ပြန်ပြီး pack ကြည့်မယ် .. ပြီးရင် zawgyi-keyboard google ပေါ်ကို တင်မယ်လေနော် ..